सूर्यबाट आउने आँधीबेहरीले पृथ्वी न,ष्ट हुने, बाँच्न सकिने सम्भावना भएको ग्र,हमा मानिस सर्ने - Like For Nepal
पृथ्वी आजका दिनमा हरेक ख,तराहरुसँग जुध्दैछ ।प्रायः पृथ्वीको उत्तर र दक्षिण ध्रुवमा एउटा रंगीन बत्ती देखिन्छ, जसलाई अरोरा भनिन्छ । अरोरा तब निर्माण हुन्छ जब सूर्यबाट चार्ज कणको हावा पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रसँग ठ,क्कर खान्छ सूर्यबाट आएको विकिरण मा,नव र जीव जी,वनको लागि हा,निकारक हुन सक्छ यस्तो
अवस्थामा चुम्बकीय क्षेत्रले पृथ्वीको लागि सुरक्षा कवचको रूपमा काम गर्दछ, तर नयाँ अध्ययनले नयाँ चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । अध्ययनका अनुसार, चुम्बकीय क्षेत्र समयको साथ कमजोर हुँदै गइरहेको छ । सूर्यबाट आउने आँधीबेहरी अझ शक्तिशाली हुने अध्ययनले देखाएको हो यसले पृथ्वीमा भएको जी,वनमा पनि अ,सर पार्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
५ अर्ब वर्षपछि…
रोयल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीको मासिक सूचनाहरूमा प्रकाशित एउटा अध्ययनमा, खगोलविद्हरूले यी वायुहरूको गहनतालाई गणना तरिकाले अध्ययन गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार अबको ५ अर्ब बर्षमा के हुन्छ भनेर देखाएको छ । जानकारी अनुसार त्यस समयमा सूर्यको हाइड्रोजन ईन्धन चालू हुनेछ र एक विशाल रातो तारा बन्नेछ।
यसबाट बाहिर आउने हावाहरूले पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रलाई न,ष्ट गर्न शुरू गर्नेछ । त्यसरी वातावरण अन्तरिक्षमा हराउन शुरू हुनेछ । यदि त्यतिखेर पृथ्वीमा जीवन जि,वित भए, विस्तारै अन्त हुने देखिएको छ । आयरल्याण्डको ट्रिनिटी कलेज डब्लिनका खगोलशास्त्री एलिन विडोट्टो र अध्ययनका सह लेखकले भनेका छन्, ‘पहिले मंगल ग्रहको वातावरण पनि यसरी न,ष्ट भएको थियो । तर त्यसको पृथ्वीको जस्तो चुम्बकीय क्षेत्र थिएन ।’
सुर्यको अवस्था के हुन्छ ?
अहिलेबाट करोडौं वर्षप,श्चात हाम्रो सूर्य इन्धनबाट बाहिर निस्किनेछ र सूर्य आफ्नै गुरुत्वाकर्षण अन्तर्गत ढल्नेछ । बाहिरी तहहरूको विस्तारको कारण र यो एक विशाल रातो तारा बन्नेछ। अन्ततः यो पूर्ण रूपमा अ,दृश्य हुन्छ र सेतो बौने तारामा परिणत हुनेछ । त्यसबेलासम्म यसको वातावरण विस्तारका कारण, बीचमा आउने ग्रहहरू ज,ल्न शुरू हुनेछन् ।
नासाका अनुसार दुबै बुध र शुक्रको न,ष्ट हुनेछन् । नासाका अनुसार पृथ्वी पनि न,ष्ट हुन सक्छ । अध्ययनमा, अ,नुसन्धानकर्ताहरूले ११ बिभिन्न ताराको नमुना तयार गरे, जसको द्रव्यमान सूर्यको भन्दा एक देखि सात गुणा धेरै थियो ।
पुनः जी,वन शुरु हुन्छ ?
अन्वेषकहरूले पत्ता लगाए कि जीवनको अन्तमा, सूर्यबाट आउने हावाको वेग र ती,व्रता फरक हुन्छ । यदि त्यसको चुम्बकीय क्षेत्र बृहस्पति भन्दा १०० गुणा ठूलो र पृथ्वी भन्दा हजार गुणा ठूलो छ भने कुनै ग्रह यस अवस्थामा मात्र बाँ,च्न सक्दछन् । केही खगोलविद्हरू विश्वास गर्छन् कि सेतो बौने ताराका परिकरणका कारण ग्रहहरूमा जीवन रहन सक्छ किनकि सूर्यको हा,निकारक किरणहरू त्यहाँ पुग्न सक्दैन ।
कुनै ग्रहले सूर्यको वातावरणको तापलाई प्र,तिरोध गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ । तर यदि त्यहाँ कुनै त्यस्तो ग्रह छ जसको चुम्बकीय क्षेत्र बलियो छ भने, त्यहाँ नयाँ जीवन पनि जन्मिन सक्दछ । आजका दिनमा मानिसहरु यस काममा लागेका छन् । अबको ५ अर्ब वर्षसम्म मानिसहरु अर्को ग्रहमा गएर बस्न सक्ने कुरालाई नर्कान मिल्दैन् । समाचार न्युज 892अनलाइन बाट साभार
२०७८ कार्तिक २, मंगलवार १३:२२ गते 1 Minute 379 Views यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
Prevयिनै हुन विश्वलाई चकित पार्ने नेपाली महिला दु;खी गरी;बलाई यति धेरै गरिन सयोग, सम्मान स्वरूप एक सेयर गर्नुहोस् ।
Nextमानिसको आयु बढाउने अ,नौठो आलु, जसको से,वनबाट मानिस दि,र्घायु बन्ने